Semalt Expert Anoziva Nzira Yokukunda Nayo Local Search Results
Injini dzinotsvaga mukana wemabhizimisi anoshuva kutora chikamu chekutsvaga nzvimbo dzavo pachavo. Kunyange zvakadaro, havaiti kuti zvive nyore kushanda navo. Ndicho chikonzero nei vachivandudza maitiro avo ekugadzirisa nguva nenguva uye kuchinja kuongorora kuratidzwa nguva nenguva. Aya maitiro haawanzofariri bhizinesi duku iro rinoedza kuwana zvakakosha kuburikidza nekutsvaga hits munzvimbo. Zvikwereti zvinotambirwa zvinotungamirirwa ne prime real estate papeji yekutanga ye seo.search injini yekuisa peji.
Mushandisi we SEO akave akapiswa nevashambadzi vanoda kuvhara makona vachishandisa maitiro emagetsi matsvuku uye chivako chekuvaka zvirongwa saka nei Google isingaiti kuti zvive nyore. Mumwe haakwanisi kuvadzora mhosva yekuita izvi: ivo vanodawo kuchengetedza vatengi vavo kugutsikana.
Kunze kwekuti nzvimbo yacho inowanikwa peji yekutanga yeSERP, ipapo hapana zvakawanda zvebhizimisi zvingawana. Bhizinesi duku ravanoda kuzviitira zita pachavo rinofanira kutarisa kune imwe nzvimbo rubatsiro. Iko mikana ndeyokuti havana mari yakakwana yekukwikwidzana nemamwe makambani akakwirira anotarisa mitsva yekutsvaga nemugwagwa wehupenyu.
Mutengi Wekutengesa Muchengetedzi we Semalt Dhidhijiti, Ivan Konovalov, inoratidzira munyaya iyo inogona kuenzanisa SEO yakarurama, pamwe nebhadharo-per-click advertising, uye kutarisa kutsvaga kwekutsvaga kukwikwidza pamwe ne kutsvaga injini kuchinja.
Kubhadhara-Tsvaga Kutsvaga Nzira yeBhizimisi Maduku
Kune vanhu vanofunga nezvekutsvaga kutsvaga kwakakodzera kune yavo yakasimba, vanofanira kubhadhara kutamba kana vachizoona chero mhinduro. Mobile mafaira anotora mipumburu miviri kuti uone migumisiro yehupenyu. Pay-per-click advertising is therefore not the best way to go for marketing for small businesses. Mukuwedzera pane izvi, zvinotora nguva yakawandisa uye zvigadzirwa zvisati zvaitika kuti munhu awane chero mararamiro ane chinangwa, kunyanya kana kukwikwidza kwakaoma.
Sarudzo ndeyekubatanidza zvishoma zveSEO, imwe PPC, uye tinge yemagariro edzimba inoita kuti kuwedzerwa kwezvose zvinoitwa nemigumisiro. Matanho anotevera anotsanangura nzira yekuita izvi:
# 1 Ongorora Data
Iva nechokwadi chekuti mazwi ese ese anoshandiswa ari kusvika. Shandisai mukati mekutsvaga keywords fomu webhusaiti, uye avo vanoratidzwa kuti vave vakakwirira kubva kuGoogle Analytics, uye zvimwe zvishandiso seSearch Console, uye Adwords . Uchishandisa shanduro yakafanana neSpyFu, fanisa kuti aya mazwi makuru anotarisana sei nemishumo inobva kumabhizimisi maitiro.
# 2 Sarudza Budget
Avhareji mari-per-click inozivisa pamusoro pehuwandu huchapedza hutsva.
# 3 Sarudza Musha
Nemashoko akaunganidzwa pamusoro pemashoko ekukosha, iyananise nekunzvimbo dzenharaunda kune nzvimbo yese iyo bhizinesi inoshumira. Kushandisa zvikwereti zvinoshandiswa zvakabhadhara:
Ita mapoka ekutsvaga mapoka panzvimbo imwe neimwe
Sanganisirai mazwi echigarire kune imwe nzvimbo
Zvikwata zveAdWords zvakadhwa zvinosanganisira keywords
Nyora zvinokurudzira zvinyorwa zvinongogadziriswa nevanhu vemo
# 4 Inopindirana PPC ne SEO
Famba munharaunda yePPC kuti uone kuti chii chinoshanda pamugwagwa, uye izvo zvinoshanda kubhadhara SEO. Kuva nerugare rakasimba rwemashoko makuru, zvinova nyore kuvakonzera ivo kune avo vanokunda kubhadharwa, uye ega.
Haisi iyo bhajeti yekambani inotarisa kuti bhizinesi duku richaita sei paSERP. Pane kudaro, kushandisa nzira inobudirira inosanganisira SEO, PPC uye inovandudza zvose zviri zviviri inovimbisa nzvimbo panzvimbo dzakakwirira Source .